Igumbi le-Orchard of Ortensia - "Frida" - I-Airbnb
Igumbi le-Orchard of Ortensia - "Frida"
Bagnolo Piemonte, Piemonte, i-Italy
I-ciabot endala ezungezwe i-greenery iguquliwe yaba indawo ethulile b & b lapho ungaphumula khona noma ufunde okuthile okusha ngezifundo ezenzekayo. I-b & b nayo inendawo yokudlela encane yasekhaya lapho ungajabulela khona ukudla okunambithekayo nokudla kwasekuqaleni okuphekwe ngemikhiqizo evela epulazini elingokwemvelo. Zama okukhethekile kwethu: ukupheka ngezimbali ezidliwayo! USara ulinde wena!
I-b & b inamakamelo okulala amabili anemibhede engu-3 ngayinye, igumbi lokugezela elihlanganyelwayo nezincwadi eziningi zokufunda. Amakamelo amabili aqanjwe ngabesifazane ababili abadumile futhi ngaphakathi kuzoba nezinkomba ezincane kubo. Endaweni evamile uzothola futhi ekhoneni le-Book Crossing. Ubungqabavu be-B&B yindawo ethulile nethokomele lapho ungaphumula khona.
Uma uthanda imvelo nezilwane ngokuqinisekile uzoba kahle. I-b & b itholakala maphakathi namahlathi, endaweni ethulile, kodwa ngesikhathi esifanayo emizuzwini engu-5 ngemoto noma imizuzu engu-40 uhamba ngezinyawo ungafinyelela edolobhaneni. I-B & b ingakunikeza izinkombandlela zokuvakashela indawo ezungezile.
Hlola ezinye izinketho ezise- Bagnolo Piemonte namaphethelo